Indlu eyakhiwe ngamaphenyane enomtsalane, iNorfolk Broads - I-Airbnb
Indlu eyakhiwe ngamaphenyane enomtsalane, iNorfolk Broads
Indlu Yesikhephe yindawo ekhethekileyo kakhulu elala abantu ababini kwigumbi lokulala elinye/igumbi lokuhlala elijongene neBroad. Ishushu ngokupheleleyo, inekhitshi elincinci, igumbi elimanzi kunye neveranda enelanga. Ibhari kunye nevenkile yokutyela zikumgama omfutshane. Ibhafu enamanzi ashushu eqeshisayo (85 85 ngokuhlala ngakunye) iyafumaneka.
Indlu Yesikhephe yindawo ekhethekileyo elala abantu ababini kwigumbi lokulala elinye/igumbi lokuhlala. Indlu inendawo efudumeleyo, ineveranda enelanga elimangalisayo apho ungaphumla khona emva kosuku oluxakekileyo ubuka le ndawo. Indawo yokuhlala inegumbi elikhulu elinye kumgangatho wokuqala onendawo yokulala enebhedi enkulu. Eli gumbi linezitulo ezimbini kunye neTV enedesika enkulu eyakhiwe phantsi kwefestile ejonge kwiBroad nezikhephe ezixhonywe ngephenyane. Le yindawo entle yombhali okanye yokonwabela isidlo sakusasa. Ngaphantsi kukho ikhitshi elincinci (akukhooveni) kunye negumbi elimanzi. Igumbi elimanzi linento eyenza kufudumale phantsi. Nceda uqaphele ukuba izitepsi eziphakathi kwemigangatho ziyanyuka ibe zisenokungafaneleki kwezinye, nceda ubone ifoto kwiwebhusayithi. Kukho ibhari kunye nevenkile yokutyela kwilali, kokubini uhambo lwemizuzu eyi-5 apho kukho isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa (yibhari kuphela). Indlu Yesikhephe inendlu yayo yehlobo owamkeleke kakhulu ukuba uyisebenzise. Iflethi ilungele izinja, siyayamkela inja enye eziphatha kakuhle.
UKUQESHA IBHAFU ENAMANZI ASHUSHU 85 ngokuhlala ngakunye. Ibhafu icociwe, igcwaliswe ize ifudunyezwe qho kubhukishwa.
Ikeyiki eyenziwe ekhaya, i-fizz kunye neebhaluni kwizihlandlo ezikhethekileyo eziyi-30
IRanworth yilali entle esembindini weNorfolk Broads. Kukho indawo yokugcina indalo kule lali eneziko labakhenkethi elifulelwe ngengca kwizibonda ezisekupheleni kwendlela ejonge eRanworth Broad. Ukusuka apha unokuthatha uhambo lwezilwanyana zasendle kwisikhephe saseNorfolk Wildlife Trust. Kukho uluhlu olukhulu lweentaka kunye nezilwanyana zasendle ezinokujongwa kwaye zimamele apha. Ibhabhathane le-swallowtail elinqabileyo linokubonwa rhoqo egadini. Icawa yaseRanworth onokuyibona kule ndawo ibizwa ngokuba 'yiCathedral of the Broads'. Khwela phezulu kwinqaba kwaye wonwabele iimbono ezimangalisayo zelali kwaye ujonge yonke indlela ukuya elunxwemeni. Icawe yaziwa ngokuba nescreen esihle serood kunye neantiphone kwaye kufanelekile ukutyelelwa. Kukho necafe apha. Ukuhamba imizuzu embalwa ukusuka kwindawo yokuhlala yi-staithe ebamba izikhephe ezininzi ezindwendwela ilali. Apha uya kufumana i-pub, ivenkile (ivaliwe ukusuka ngoNovemba ukuya kuMatshi) kunye nekhefi. Yindawo entle yokufumana isidlo okanye isiselo kwaye ubukele umhlaba udlula. Kukho ukuhambahamba kule ndawo kwaye usenokuthanda ukutyelela iFairhaven Woodland kunye neeGadi zaManzi ezikufuphi, ezineehektare ezingama-53 (iihektare ezingama-131) zommandla omhle wamaplanga, iigadi zamanzi kunye nendawo yabucala eMazantsi eWalsham.
Phakathi kwezinto ezininzi ezenza ukuhlala apha kube yinto ekhethekileyo, kukuvuka kukukhanya kwelanga kunye nenkungu ejinga kwindawo ebanzi (kunye ne-boom of bittern mgama ukuba unethamsanqa!), ukumamela izikhova ezintyilozayo ebusuku kwaye zihambahamba. ngasemlanjeni ngephenyane. Kuninzi okubonayo nokwenza apha hayi kuphela elalini kodwa nakweminye iBroads. Sikwakufuphi neelwandle ezininzi. Ulwandle lwaseWinterton luthandwa ngabantu basekhaya kunye neendwendwe zethu. Kukho i-cafe kanye elunxwemeni kunye ne-pub epholileyo kwilali yaseWinterton. INorwich ikwisiqingatha seyure kuphela kude neevenkile zayo ezintle kunye neemyuziyam. I-Wroxham yimizuzu eli-15 kude apho unokuqesha khona isikhephe ukuba ujonge iindlela zamanzi kwaye kukho iijethi zokuloba kuMlambo i-Free, malunga nemizuzu eli-10 ngemoto. Yiba nomfanekiso weSpa eBlofield Heath unoluhlu lonyango lokuphumla olukhoyo, kwakhona yimizuzu eli-10 kuphela kude!
Sihlala ecaleni kwendlu yesikhephe ukuze sifumaneke ukuba iindwendwe zinemibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Norwich